Ghaghachi ekwentị gị n'enweghị nsogbu na nkeji ole na ole | Gam akporosis
Fanye ekwentị gị n’enweghị nsogbu na nkeji ole na ole
E nwere ọtụtụ ndị na-eme ka ụgwọ ọrụ kwa ọnwa site n'aka ndị ọrụ dị iche iche dị na ahịa dị ọtụtụ. N'iburu nnukwu asọmpi ahụ, ọ ga-ekwe omume ịkwanye igwe na ebe a kapịrị ọnụ, ma ọ bụ na weebụsaịtị nke onye ọrụ, ebe enyere ikike na enwekwara ọtụtụ ndị ọzọ.
The nhọrọ maka fanye mobile ha nwere nchebe ma ọ bụrụ na ha mezuo ọtụtụ ihe, ọ bụ ya mere na mgbe ụfọdụ ọ ka mma ịkụ nzọ na ịhọrọ nke kachasị mma maka ịkwụ ụgwọ ahụ. Site na ịga ụlọ ahịa nke onye ọrụ na ajụjụ ka ịme ya na weebụsaịtị onye ọrụ ị nwere, mekwaa ya site na-akpọ ụlọ ọrụ n'efu.
1 Site na ndị ọrụ
6 Mmachi na mba ndị ọzọ
7 Fanye n 'ikike ikike
Site na ndị ọrụ
Ọ bụ nkwụghachi ụgwọ a pụrụ ịdabere na ya, nke ọ bụla n'ime ha site na webụsaịtị na-enye ụgwọ na ụzọ dị mfe, ebe ọ na-ajụ anyị maka nọmba ekwentị, email, ego iji fanye na nọmba kaadị. N'echiche a, na-elele anya mgbe niile na ọ bụ peeji enyere ikike yana na ọ bụghị websaịtị na-enweghị mkpọchi n'akụkụ adreesị ahụ.
Ozugbo ị fanyeghachiri ya, lelee site n’aka ụlọ akụ gị na ha ewepụla ego ahụ, ọ na-ejikarị aha ụlọ ọrụ ahụ na ego ahụ akara ya. Ọ bụ 100% nchekwa dị mma ma ọ bụrụhaala na ị nweta ibe gọọmentị ma soro usoro nke ga - ewe naanị nkeji ole na ole.
N'okwu a anyị ga-enweta Movistar.esOzugbo anyị banyere n'ime, anyị pịrị ọnụego mkpanaka wee gbadaa na menu nke kwuru "may nwekwara ike inwe mmasị na" wee pịa na "Recharge your mobile" square. Nwere ike ịme ya na kaadị ma ọ bụ site na ekwentị site na ịkpọ 2200 na Spain ma ọ bụrụ na ị nọ mba ọzọ ọ ga-abụ 1004.
Ozugbo itinye nọmba, email, ego ị ga-akwụ ụgwọ na ịnakwere ọnọdụ ojiji, ụlọ ọrụ ahụ ga-arịọ gị maka kaadị iji hazie ya. Nke a ga - ewe naanị nkeji 2-3.. Companylọ ọrụ ahụ ga-ajụ gị, na mgbakwunye na ọnụ ọgụgụ ahụ, maka koodu CSV (azụ nke kaadị). I nwekwara ike ikwunye ekwentị site na nọmba 22132.
Idoghachi na Vodafone anyị ga-enweta Vodafone.esUgbu a, ị ga - gbadaa ruo mgbe ịchọta menu "Mobile Rates", pịa na "Akwụ ụgwọ ụgwọ" ma nhọrọ ahụ ga-egosi na akara nke atọ. Ebe ọ na-ekwu "Ọ bụrụ na ị na-ama-akwugo ugwo, fanye gị ọnụego na-enweta mmezi gigs" pịa "fanye ebe a".
Usoro ahụ dị ka nke Movistar, tinye nọmba ka ọ gbanyeghachi, họrọ ego achọrọ ma pịa gaa n'ihu, ugbu a ịkwesịrị itinye nọmba kaadị na koodu CSV iji kwado ihe niile. Nke a ga-ewe anyị obere karịa nkeji ole na ole iji ekwentị mkpanaaka.
Onye ọrụ France Orange ga-ekwe ka anyị kwụgharịa ekwentị site na Orangerecargaygana.orange.esOzugbo anyị banyere saịtị ahụ, anyị pịa "Akwajuru". Ugbu a n'ime ebe anyị na-ewebata nọmba ekwentị, ego ole ma webata kaadị kredit ma ọ bụ ịkwụ ụgwọ ya na ụlọ akụ eletrọniki.
Orange ga-emekwa ka anyị jiri kaadi mba ọzọ jiri ekwentị zuo ekwentị ma site na ịkpọ 1470, ọ ga-ajụ anyị maka ego dị iche iche iji kwụghachi. Onye oru gha aghanye onu ogugu, ego ya na kaadi ya, yana ozi ndị ọzọ ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa.
MásMóvil na-enye ndenye na ekwentị gị n'ime nkeji ole na ole site na ịbanye mpaghara ndị ahịa, maka nke a ọ dị mkpa iji tinye adreesị yosoymas.masmovil.es, tinye nọmba / email na paswọọdụ. Onye na-ahụ maka ọrụ ga-ajụ gị maka ọnụ ọgụgụ, ego ole itule na kaadị iji mee ya.
Na mgbakwunye, MásMóvil na-egosi na weebụsaịtị kacha ụlọ ahịa kacha nso ebe a ga-eme ya, yabụ ịme ihe nkwụghachi ga-adị mfe, na nke a ka etinyere kiosks na saịtị na ekwentị data. Ejiri Yoigo mee MásMóvil, otu n'ime ndị ọrụ ahụ nwere ezigbo ahịa na Spain.
Mmachi na mba ndị ọzọ
Ọ bụrụ na ịnọghị, ị nwere nhọrọ nke ịmegharịghachi na weebụsaịtị nke ndị ọrụ dị iche iche na mba ahụ, maka nke a, ọ dị mkpa ịnweta peeji ahụ ma soro usoro ndị a. Gagharị bụ otu n’ime ihe achọrọ ịrụ ọrụ ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ịkpọ oku ma nwee ọrụ ịntanetị.
N'etiti nhọrọ dị iche iche, ihe niile na - eme ka ị bụrụ onye ọzọ na - arụ ọrụ na mba ahụ, ebe ahụ bara uru bụ inwe ike ịnwe isi kachasị dị nso. Prekpachara anya ị ga - eme n'ihe banyere iweghachi bụ ịbanye peeji ndị echedoro ma nwee ntụkwasị obi, nweta ntụkwasị obi na ndị ị na-agabeghị na mbụ ma enweghị mkpọchi n'akụkụ adreesị weebụ na ihe nchọgharị ahụ.
Fanye n 'ikike ikike
Ọ bụrụ n ’ịnọ na Spen, e nwere ọtụtụ kiosks, tobacconists ma ọ bụ ụlọ ahịa na - akwụ ụgwọ akwụmụgwọ maka ndị ọrụ akwụgoro ụgwọ. N'okwu a, ọ ga-ezuru iji nye nọmba ekwentị na ego ole ị ga-akwụghachi, nke kacha nta ga - abụ 5 na nke kachasị ga - adabere na ọnụego ahọrọ.
Ihe niile na - eme na nkeji ole na ole ma ọ bụ ụzọ kachasị ọsọ Mgbe ọ bụla ị nọ na Spen, ụzọ a ga-esi na-esi mba ọzọ akwụ ụgwọ na-eme site na weebụsaịtị ma ọ bụ site na adreesị ndị ọzọ a pụrụ ịdabere na ya. Onye ọrụ ahụ mechara bụrụ onye na-ekpebi ebe a ga-eme ya ma anyị ga-enwe kaadị kredit.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Fanye ekwentị gị n’enweghị nsogbu na nkeji ole na ole
Microsoft na-atụle iweta ngwa gam akporo na Windows 10
Netease na-ekwupụta Total War Battles: WARHAMMER na ụgbọala na-adọkpụ iji nweta anyị na sadulu